Home | Open Myanmar Initiative Resources
လွှတ်တော် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အစီရင်ခံစာ
Parliamentary Research/Quantitative Research
လွှတ်တော်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အစီရင်ခံစာ အမှတ် (၆) - မြန်မာ့လွှတ်တော်ကို ကိန်းဂဏန်းအခြေပြု ချဉ်းကပ်လေ့လာချက် (၁၁ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ကိန်းဂဏန်းအခြေပြု ချဉ်းကပ်လေ့လာချက်)
Report No.4- Prepared by Parliamentary Observation Program of Open Myanmar Initiative features quantitives study of motions submitted by MPs in Pyithu Hluttaw, Amyotha Hluttaw and Pyidaungsu Hluttaw in tenth regular session.
လွှတ်တော် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အစီရင်ခံစာ အမှတ် (၄) - မြန်မာ့လွှတ်တော်ကို ကိန်းကဏ္ဍန်းအခြေပြု ချဉ်းကပ်လေ့လာချက် (ဒဿမအကြိမ် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ကိန်းဂဏ္ဍန်းအခြေပြု ချဉ်းကပ်လေ့လာချက်)
Report No.3- Prepared by Parliamentary Observation Program of Open Myanmar Initiative features quantitives study of motions submitted by MPs in Pyithu Hluttaw, Amyotha Hluttaw and Pyidaungsu Hluttaw from seventh regular session to ninth regular session.
လွှတ်တော် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အစီရင်ခံစာ အမှတ် (၃) - မြန်မာ့လွှတ်တော်ကို ကိန်းကဏ္ဍန်းအခြေပြု ချဉ်းကပ်လေ့လာချက် (သတ္တမအကြိမ်မှ နဝမအကြိမ်အထိ ပုံမှန်အစည်းအဝေးများအတွင်း မေးခွန်းများနှင့် အဆိုများ လေ့လာချက့်လာချက်
Report No.2- Prepared by Parliamentary Observation Program of Open Myanmar Initiative features quantitives study of motions submitted by MPs in Pyithu Hluttaw, Amyotha Hluttaw and Pyidaungsu Hluttaw from first regular session to sixth regular session.
လွှတ်တော် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အစီရင်ခံစာ အမှတ် (၂) - မြန်မာ့လွှတ်တော်ကို ကိန်းဂဏန်းအခြေပြု ချဉ်းကပ်လေ့လာချက် (ပထမအကြိမ်မှ ဆဋ္ဌမအကြိမ်ထိ ပုံမှန် အစည်းအဝေးများအတွင်း အဆိုများလေ့လာချက်)
Report No. 1 - The quantitative study on questions of Myanmar parliament (1st regular session to 6th regular session)
လွှတ်တော် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အစီရင်ခံစာ အမှတ် (၁) - မြန်မာ့လွှတ်တော်ကို ကိန်းဂဏန်းအခြေပြု ချဉ်းကပ်လေ့လာချက် (ပထမအကြိမ်မှ ဆဋ္ဌမအကြိမ်ထိ ပုံမှန် အစည်းအဝေးများအတွင်း မေးခွန်းများလေ့လာချက်)
Parliamentary Research/Bill Tracking
လွှတ်တော်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အစီရင်ခံစာ အမှတ် (၈) - မြန်မာ့လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုခဲ့သော ဥပဒေများအား လေ့လာခြင်း အစီရင်ခံစာ အမှတ် (၃)
လွှတ်တော်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အစီရင်ခံစာ အမှတ် (၇) - မြန်မာ့လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုခဲ့သော ဥပဒေများအား လေ့လာခြင်း အစီရင်ခံစာ အမှတ် (၂)
လွှတ်တော် စောင့်ကြည့် လေ့လာရေး အစီရင်ခံစာ အမှတ် (၅) - မြန်မာ့လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုခဲ့သော ဥပဒေများအား လေ့လာခြင်း အစီရင်ခံစာ အမှတ် (၁)
ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန် အစည်းအဝေး၏ ဇူလိုင်နှင့်ဩဂုတ်လများတွင် လွှတ်တော်တွင်း ဆောင်ရွက်ချက်များ - လွှတ်တော်ရေးရာ တစ်လတာ
ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော် ပထမပုံမှန် အစည်းအဝေး၏ မေလတစ်လစာ လွှတ်တော်တွင်း ဆောင်ရွက်ချက်များ - လွှတ်တော်ရေးရာ တစ်လတာ
ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော် ပထမပုံမှန် အစည်းအဝေးများ စတင်ကျင်းပခဲ့သည့် ၁.၂.၂၀၁၆ မှ ၆.၄.၂၀၁၆ အထိ လွှတ်တော်တွင်း ဆောင်ရွက်ချက်များ - လွှတ်တော်ရေးရာ နှစ်လတာ
Parliamentary Research/Session Recap
ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၅ ဇန်နဝါရီ - ၂၄ မတ်၊ ၂၀၁၈) အတွက် လွှတ်တော်အစည်းအဝေး သုံးသပ်ချက်
ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၇ အောက်တိုဘာ - ၂၄ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၇) အတွက် လွှတ်တော်အစည်းအဝေး သုံးသပ်ချက်
ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၈ မေ - ၃၁ ဩဂုတ်၊ ၂၀၁၇) အတွက် လွှတ်တော်အစည်းအဝေး သုံးသပ်ချက်
ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး (၃၀ ဇန်နဝါရီ - ၁၇ မတ်၊ ၂၀၁၇) အတွက် လွှတ်တော်အစည်းအဝေး သုံးသပ်ချက်
ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၆ နိုဝင်ဘာ - ၂၁ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၁၆) အတွက် လွှတ်တော်အစည်းအဝေး သုံးသပ်ချက်
ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၅ ဇူလိုင် - ၇ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၆) အတွင်း လွှတ်တော်အစည်းအဝေး သုံးသပ်ချက် အစီရင်ခံစာ
ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်များ၏ ပထမပုံမှန် အစည်းအဝေးများအတွင်း ဆောင်ရွက်ချက်များကို လေ့လာ၍ ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်မှ ရေးသားပြုစုထားသော "ပထမပုံမှန် အစည်းအဝေးကို လေ့လာခြင်း အစီရင်ခံစာ"
Parliamentary Research/Parliamentary Research Paper Series
Civil Engagement between MP and their regional community
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဒေသခံ ပြည်သူများအကြား အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စစ်တမ်း
Open Myanmar Initiative's Parliamentary Research Paper Series No.(3) - How legislative amendments have changed the role of Myanmar's Constitutional Tribunal
ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင် လွှတ်တော်ရေးရာသုတေသန အစီရင်ခံစာ အမှတ်(၃) - ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်များအရ ပြောင်းလဲလာခဲ့သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံး၏ အခန်းကဏ္ဍ
Open Myanmar Initiative's Parliamentary Research Paper Series No.(2) - The Role Of Committees in the Assessment of Government Budget
ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင် လွှတ်တော်ရေးရာသုတေသန အစီရင်ခံစာ အမှတ်(၂) - လွှတ်တော်၏ ဘတ်ဂျက်စိစစ်မှုတွင် ကော်မတီ/အဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ
Open Myanmar Initiative's Parliamentary Research Paper Series No.(1) - Floor Debate Vs Committee Coordination Meeting - AnalysingaChange in Legislative Process
ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်၏ လွှတ်တော်ရေးရာ သုတေသန စာစဉ် အမှတ်(၁) - လွှတ်တော်၏ ဥပဒေပြုရေး အပြောင်းအလဲတစ်ရပ်ကို လေ့လာခြင်း
Parliamentary Research/Research Briefing
Hluttaw Land Briefing
Budget Monitoring/State & Region Budget Brief
ကချင်ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈
ကယားပြည်နယ် ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇
ကယားပြည်နယ် ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈
ကရင်ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇
ကရင်ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈
မွန်ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇
မွန်ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈
ရှမ်းပြည်နယ် ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈
ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ မွန်၊ စစ်ကိုင်း၊ တနင်္သာရီ၊ ပဲခူး၊ မကွေး၊ ဧရာဝတီ)
Local Governance Research Report
ဒေသန္တရ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ သုသေတန စာတမ်း
Local Governance Survey
ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်စီမံမှုဆိုင်ရာ စစ်တမ်း
OMI's Annual Reports
Annual Report for Open Myanmar Initiative 2015